डचटाउन व्यवसायहरूको लागि अनुहार सुधार अनुदान • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
अनुदानहरू पहिले आउने, पहिलो सेवाको आधारमा स्वीकृत गरिनेछ। अनुदानहरू डचटाउन सीआईडी ​​द्वारा वित्त पोषित छन्।
अनुदानको लागि आवेदन दिन आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुहोस्। तपाईं एक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आवेदन को भर्न योग्य PDF संस्करण or तलको अनलाइन फारम प्रयोग गरेर आवेदन दिनुहोस्। पूरा भएको आवेदनको साथमा, केही कागजातहरू आवश्यक पर्दछ, जसमा अनुहार अवस्थाको हालको फोटोहरू, योजनाबद्ध सुधारहरूको विवरण र वस्तुगत लागतहरू, र यदि आवेदकले ठाउँ भाडामा दिन्छ भने सम्पत्ति मालिकबाट अनुमति पत्र।
Dutchtown Main Streets' Board of Directors समीक्षा आवेदनहरू। बोर्डले आवेदन अनुदान सर्तहरूको पालना गर्दछ भनेर निर्धारण गर्न खोज्नेछ। सुधार गर्न को लागी गुणहरु मा स्थित हुनुपर्छ डचटाउन सीआईडी ​​पदचिह्न र योजनाबद्ध सुधारहरूले डिजाइन सिफारिसहरू पूरा गर्नुपर्छ।
आवेदकहरू पूर्ण सुधारहरू। एक पटक आवेदकले बोर्डबाट अस्थायी स्वीकृति प्राप्त गरेपछि, 90 दिन भित्र काम सुरु गरी छ महिना भित्र पूरा गर्नुपर्छ। सुधारहरू जुन आवेदनको स्वीकृति अघि चलिरहेका छन् प्रतिपूर्तिको लागि योग्य छैनन्। यदि काम आवश्यक समयसीमा भित्र पूरा गर्न सकिँदैन भने, आवेदकले एक विस्तार अनुरोध गर्न र ढिलाइको कारणको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ।
अन्तिम स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुहोस् र प्रतिपूर्ति प्राप्त गर्नुहोस्। एक पटक काम पूरा भएपछि, आवेदकले सम्पन्न परियोजनाको फोटोहरू र परियोजना खर्चको ब्रेकडाउन सहित पोस्ट-प्रोजेक्ट कागजात पेश गर्नेछ। बोर्डले परियोजनाको दिशानिर्देशहरू पालना गरेको सुनिश्चित गर्न पेश्कीहरूको समीक्षा गर्नेछ, र जबसम्म कामले आवश्यकताहरू पूरा गर्छ, अनुरोध गरिएको अनुदान ($ 500 सम्म) को लागि चेक जारी गरिनेछ।
तलको फारम प्रयोग गर्नुहोस्, वा यो PDF आवेदन पूरा गर्नुहोस् र यसलाई पठाउनुहोस् info@dutchtownstl.org.
व्यवसायिक नाम *
व्यापार ठेगाना *
प्राथमिक सम्पर्क जानकारी
संपर्क नाम *
सम्पर्क इमेल *
परियोजना विवरण र लागत
तपाईंको योजनाबद्ध सुधार परियोजनाको संक्षिप्त लिखित विवरण प्रदान गर्नुहोस्।
अनुमानित सुरु मिति *
अनुमानित समापन मिति *
कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस्
फोटोहरू, प्रेरणा फोटोहरू वा रेन्डरिङहरू, सम्पत्ति मालिकहरूबाट पत्रहरू, वा कुनै अन्य प्रासंगिक कागजातहरू अघि समावेश गर्नुहोस्।
आवेदक चेकलिस्ट र हस्ताक्षर
मैले तस्बिरहरू अघि समावेश गरेको छु। मैले प्रस्तावित कार्यको लागि लागू हुने डिजाइन, प्रेरणा फोटोहरू, र अनुमानहरू समावेश गरेको छु। मेरो परियोजनाले मैले भित्र सञ्चालन गरेको भवनमा सडक-फेसिङ फेसेड सुधार गर्नेछ। अस्थायी अनुमोदन भएको ९० दिन भित्र काम सुरु गरिनुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु। अनुदान स्वीकृत भएको ६ महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने मैले बुझेको छु । म बुझ्छु कि अनुदान कोष प्रतिपूर्तिको आधारमा मात्र जारी गरिन्छ। मैले भवन मालिकबाट हस्ताक्षरित पत्र समावेश गरेको छु (यदि लागू भएमा)।
यहाँ आफ्नो हस्ताक्षर कोर्नुहोस्।
तपाईको ब्राउजरले ई-सिग्नेचर फिल्डलाई समर्थन गर्दैन।
तपाईंको आवेदन पेश गर्नुहोस्
तल दायर गरिएको कारोबार. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. कारोबार, डचटाउन, डचटाउन सीआईडी, र डचटाउन मुख्य सडकहरू. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो मार्च 7th, 2022 .
डचटाउन STL.org कारोबार डचटाउन व्यवसायहरूको लागि अनुहार सुधार अनुदान